Ciidamada TFG-da oo ku Dagaalamay Ex. "Fiyoore Muqdishu" | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamada TFG-da oo ku Dagaalamay Ex. “Fiyoore Muqdishu”
Moqadishu (Keydmedia) - Iska hor imaadkan oo barqanimadii Maantay ka dhacay Xaafadda Ex. Fiyoore ee Magaalada Muqdisho ayaa sababay Khasaare isugu jira Dhimasho iyo Dhaawac.
Inta la Xaqiijiyay Iska hor imaadkaas ayaa waxaa ku dhintay Hal Askeri halka qof Rayid ahina uu ku dhaawacmay. Goob jooge ku sugan goobta Iska hor imaadku ka dhacay ayaa sheegey in ay ka bilaaban tay Muran u dhaxeeyay Ciidamadaas ku aadan isku qab qabsi Guryihii Dawladda oo dhawaan la amray in la banneeyo ama laga guuro Murankaasoo muddo soo Jiitamayay ugu danbayntiina keenay in Ciidamadan isku dhacaan.
Goobtii uu iska hor imaadku ka dhacay ayaa waxaa markiiba soo gaaray Saraakiil ka tirsan Ciidamada Dawladda kuwaasoo joojiyay Rasaastii ay is weeydaarsanayeen Qofka Rayidka ah ee halkaa ku dhaawacmay ayaa ahaa Fannaanka Soomaaliyeed Cabdi Tahliil Warsame oo la sheegey in halkaas uu ka soo gaaray dhaawac fudud.
Al Fanaan Cabdi Tahliil ayaa ka dhawaa goobta iska hor imaadku ka dhacayay halkaasoo la sheegay inuu ku soo gaaray Dhaawac Fudud.
Iska Hor Imaadkii Maanta ka dhacay Ex. Fiyoore ayaa waxaa uu qaddar hakad geliyay isu socodkii Dadka iyo Gaadiidka iyadoo goobihii Ganacsiguna ay Xirmeen.
Xaaladda ayaa iminka deggan iyadoo isu socodkii Dadka iyo Gaadiidkuna ay Caadigoodii ku so noqdeen ka gadaal markii Saraakiishii halkaa soo gaadhay ay ku guuleysteen in ay kala dhex galaan Ciidamadii halkaa ku dagaalamayay.